Fifandraisana SOKAJY PSYCHART Therapy
Ny làlana fanombohana 3
Ity sivilizansa mahatohitra fanombohana ity dia tompon'andraikitra amin'ny fikirizan'ny bisexualite mitika izay manery ireo olona tsy voarindra mba hampihena ny lehilahy hafa amin'ny toetran'ny "lehilahy phallus" ...
Ny zanak’olo-mpiray tam-po iray izay nifikitra tamin’ny fomban-drazana sy ny mpanakanto nampianarin-tena dia nampianatra ahy ny fomba famoronana hafahafa eo anivon’ny Bété taloha. Napetrak'ilay mpanakanto tapa-kazo nanomboka tamin'ny ...
Ny fahaterahan'ilay lehilahy mainty hoditra
Ny asa notohizan'ny tantara sy ny fiteny amin'ny alàlan'i Cheik Anta Diop sy Théophile Obenga dia manana fahalianana tsy azo resahina fa nanampy ho porofo fanampiny amin'ny ...
Avy amin'ny fanangonana voalohany, Epaves (1981), Grobli Zirignon no nametraka ny feo. Nanamafy ny tenany ho toy ny poeta sesitany izy, ary mirenireny tsy misy fiafarany. Nihira ny fisian'io lehilahy tsy manana fanjakana ao ...
Tsy afaka nandao ny olombelona tahaka ny ankehitriny isika. Tandindomin-doza tsy ho ela ny famerenam-bidy sy ny famotehana tena izy, ny vokatra mahafaty noho ny tsy fahaizany maneho sary azy ...
Ny faniriana hahatsapa ho "tsara amin'ny tenako" ary ho faly ho velona no antony nanosika ahy hiditra amin'ny famakafakana. Ity fanjakana ity dia fantatro ...
Rehefa niaina fa ity tontolo ity dia toerana fijaliana, dia nofinofisin'ny olona foana ny famonjena foto-pinoana ao amin'ny fivavahana sy ny foto-kevitra ara-tsosialy. Androany, aorian'ny ...
Fampidirana an'i Grobli Zirignon's "Existence-exile" nataon'i Sery Bailly
Ny teny fampidirana dia teny miaraka amin'ny iray hafa. Ny fiaraha-dia dia tsy mpiorina ny dia, izany hoe mahay ny gadona sy ny toerana halehany. Raisinay ny ...
Ny fialan'ny fiteny
Ilay vehivavy "nanana" ny Teny no nametraka ny fanorenan'ny tontolon'ny olombelona, ​​noho ny hetsika famoronana ilay fundamentier, ny phallus, izay misolo tena ny tanjon'ny ...
Mazava ny fandinihana: ao anaty krizy ny fiarahamonina olombelona ary na aiza na aiza misy resaka momba ny fahitana indray ny sivilizasiona, na dia tsy ampiasaina foana ilay teny hoe refounding. Izay ...
Ny asan'ny psycho-therapy - Zirignon Grobli
Psycho-therapy dia hevitra iray misy fehezan-teny roa: Psycha izay fanafohezana ny psychoanalysis sy ny art therapy. Playing GROBLI ZIRIGNON GALERIE EXPOSITION Directeur: Abrams DJ GROBLI ZIRIGNON ...
Ny tetikasa voalohany amin'ny fiarahamonina
Ny fanoratana dia fitaovam-piarovana sy fampitana ny renivohitra ara-kolontsaina voangon'ny fizotry ny fanombohana. Teraka tany Egypte, ny hafatra dia nampitaina tamin'ny fenisianina (zanak'olo-mpiray tam-po amin'ny egyptiana) izay natolotr'ireo barbariana ...